Ilay Zava-boavina Volondriana avy any amin'ny Hill Pierre Loti dia mahasarika ny rehetra | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulFijery momba ny volamena Horn avy ao amin'ny Pierre Loti Hill Enchants
13 / 05 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Headline, Faritra Marmara, TORKIA, TELPHER
Mijery amin'ny rehetra ny fahitana an'i Halic avy any Pierre Hill
Rehefa tonga any amin'ireny làlan-kivoana ireny ianao, izay faritra tsara indrindra ahafahanao mijery io tontolon'ny sarintsarin'ny volamena malaza io; Tratra ny kafe, nomena ny anaran'ny mpanoratra frantsay malaza Pierre Loti. Ny tena anaran'i Pierre Loti, izay mipetraka maharitra ao Istanbul ary tena Istanbul tena izy, dia i "Julien Viaud". Ny kafe manan-tantara no toerana mety ahafantarana ny fijery tokana. Azo atao koa ny miakatra eo an-tampon'ny havoana amin'ny alàlan'ny fiara an-tariby.
momba ny havoana pier loti
Voalaza fa tonga tany an-kafe ity antsoina hoe "Rabia Women's Coffee" i Pierre Loti, izay nahita azy ho tanindrazana faharoa, ary nanoratra ny nosoratany hoe "Aziyade" fanoherana ny Golden Horn. Ny faritra, izay misy ny "faritra tiorka" tany am-boalohany izay naverina tamin'ny laoniny ary notohizany ho velona ankehitriny, dia misy toerana iasana ho toeram-pizahan-tany. Ilay faritra dia antsoina hoe Evliya Çelebi Travel Book ho ny "Idris Mansion Promenade".
Pierre Loti, izay toerana fivahininan'ny vahiny sy mpivahiny rehetra tonga tany Istanbul tamin'ny taonjato faha-19, dia manana tranobe ara-tantara maro manodidina azy. Iray amin'izany ny Kaşgari Tekkesi hazo misy soratra roa, voatondro tamin'ny 1813. Indray, eo amin'ny fidirana amin'ny tranobe, ilay tranobe misy fasana fotsy boribory voasoratra amin'ny teny Persiana dia Çolak Hasan Tekkesi. Ny trano ara-tantara ao amin'ny tsipika Tekke dia Sekolin'ny Fitsaboana. Ny fasan'ny Mevlevi antsoina hoe "İskender Dede", izay maty tamin'ny 1589, dia mipetraka eo anoloana Mekteb sy ao anatin'ny faritry ny trano, izay naorin'i İdris-i Bitlisi, izay mpanoratra tantara ara-tantara ao Ottoman ihany koa. Ny iray amin'ireo fantsakana telo manoloana an'i İskender Dede dia ilay Dilek malaza (na fikasana) malaza. Ao amin'ny Evliya Çelebi Seyahatname momba ity lavadrano ity; Nanoratra izy fa "ireo izay mijery ny fantsakana dia mahita ny faniriany ao amin'ny famatsian'izy ireo". Eo amin'ny faritry ny fasana dia misy ny fasan'i Saray “Atçıbaşı (Mirahur-Tuğ General) Ali Ağa sy ny fianakaviany. Ankoatr'izay, ny "Sarnıç", izay heverina fa naorina tamin'ny vanim-potoanan'ny Byzantine ary nampiasaina tamin'ny vanimpotoana Ottoman, dia mitazona ny fisiany ao afovoan-trano.
Ahoana ny fomba hidiran'ny Pierre Loti Hill?
Raha handeha amin'ny fiara ianao; Misy lalana miverina mankany Pierre Loti. Amin'izany fomba izany, afaka miakatra ny havoana ianao ary avelao ny fiaranao, avelao ny zaridainan'ny fiara…
Ireo izay tsy mitondra fiara avy amin'ny lafiny Anatolian dia afaka mora foana amin'ny Üsküdar - Eyüp ferry. Afaka miakatra havoana ianao amin'ny alàlan'ny fiaran'ny tariby avy ao amin'ny seranan-tsambo.
Raha mandeha bus ianao dia mila miala amin'ny Eyüp Sultan mijanona eo ho eo amin'i Pierre Loti ary haka fiara avy ao anaty tariby.
Afaka mandeha amin'ny fiara tariby mankany Pierre Loti Hill ianao miaraka amin'ny akbil ...
Sidina ny saran-dàlana amin'ny tariby Pierre Loti
Mba hahazoana any Pierre Loti Hill amin'ny alàlan'ny fiantsonan'ny fiara tariby, alàlan'ny fiara misy ny tariby misy anao ny Istanbul Metropolitan Munisipaly. Noho izany dia afaka mandalo amin'ny famakiana ny 'Kadananao Card' ianao ho toy ny fanontana mahazatra. Ho an'ny andiany tsirairay dia mandoa 2,60 ny mpihazona karatra mahazatra. Raha mandoa 1,85 ny mpampianatra, 1,25 ny vidin'ny tapakila ataon'ny mpianatra.
Sary ho an'ny sarin'i Pierre Loti miaraka amin'ny fomba fijery tokana
Pierre Loti sy Cable Car (Photo Gallery - Video)
Ny fananganana dia manomboka amin'ny làlan'ny seranan'i Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk
Ny fiara anelanelan'ny Eyüp sy Pierre Loti dia ho tonga any Miniatürk
Ny paikadin'ny zotra tarihin'i Pierre Loti-Miniatürk dia notanana
Fampandrenesana fanolorana: Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Cable Car System
Iza moa i Pierre Loti?
Afaka nesorina tao Lisitry ny lova eran-tany i Istanbul noho ny halak'i Meti Haliç Metro
Ekrem İmamoğlu: 'Ho ritra ny harambato amin'ny havo-bolamena, hisy rano avy amin'ny loharano Ahmet faha-3'
Tafika Varda manan-tantara
Rabia Vehivavy kafe kafe
Torolàlana Famaritana Virus an'ny Coronary Navoakan'i Sector
Hizaha ny Bursa avy amin'ny fiara fitaterana
PIerre Lotiye roa fiara an-dalamby vaovao
3. Ny fijerin'i Bosphorus amin'ny tongotr'ilay tetezana